ထက်ထက်မိုးဦး သတင်းကို ၀န်ကြီး ပိတ်ပင် | Mandalaygazette's Weblog
ထက်ထက်မိုးဦး သတင်းကို ၀န်ကြီး ပိတ်ပင်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း၏ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် ထက်ထက်မိုးဦး သတင်းကို ပိတ်ပင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနမှ စာစစ်မှူးတဦးက ပြောသည်။
← ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲများကို မိုးဆမ်းပန်းကုမ္ပဏီမှ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် မြ၀တီရုပ်မြင်သံကြားတို့တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမည်	အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် မုသားစကားဆိုတတ်ကြပြီး ယင်းအတွက်လည်း ရှက်ရွံ့မှု နည်းပါးကြကြောင်း စစ်တမ်းတစ်ရပ်က ဖော်ပြသည်။ →
7 thoughts on “ထက်ထက်မိုးဦး သတင်းကို ၀န်ကြီး ပိတ်ပင်”
May 27, 2010 at 9:30 pm Reply
ကျော်ဆန်းနဲ့ ဒီဟာမ ဘာတော်လို့ ပိတ်၇တာလည်း၊ ကျော်ဆန်းမိန်းမ သွားဗျူးကြမှ ဂျာနယ်လစ်အစစ်တွေဖြစ်မယ်
သွားဗျူးကြဟေ့။ ၀န်ကြီးကတော် ဒီသတင်းကြောင့်ဘယ်လိုခံစားနေ၇သလဲဆိုတာ
May 27, 2010 at 10:06 pm Reply
The dictator does not tolerate this kind of news, the tug of war between rich film actress and smaller than life reporter. It seems the smaller is getting public sympathy in this scenario. The junta represent the strong, manipulative, arrogant, rich and rude character which is characteristic of actress in this particular event. The truth must never play the role in public life under strict Junta` manipulative rule. In the normal society, the actress to behave that bad in public domain is almost unthinkable and if it happened, it would be suicidal character assassination of the celebrity. Media would definitely sanction the celebrity for calling class war on lower rank colleague. In Asian society, the master of the house decide the well-being of the servant who could be beaten asapunishment for simply damaging some utensil during her duty. The rich can oppress the poor substantially. The Junta naturally represent the rich, the richest of the rich now in Burma are junta`s apologists, cronies or relatives. I hope my explanation here give reason for junta to quickly hide it under the carpet.
ထက်ထက်မိုးဦး ကို ဒီဟာမလို့ ပြောရအောင်
နင်ကဘာ ကောင် လဲ
June 15, 2010 at 7:57 am Reply
June 22, 2010 at 10:55 pm Reply
၂ပြားတစ်ပဲ လစာလေးကို သနားလို့ ဖြေနေတာ ဆိုတဲ့စကား ထက်ထက်ပြောကြောင်း
ယုံ နေတာကျတော့ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီလို့လားလို့ လူထုစိန်ဝင်း နဲ့
မောင်ဝံသ တို့ကို မေးလိုက်ချင်ပါသေး။တစ်ဖက်စကားကိုပဲ နားထောင်ပြီး
မှတ်ချက် မချသင့်ဘူးဆိုတာ ဉဏ်ကြီး ရှင်တို့ မေ့ချင်ဟန်ဆောင်နေ
တာလား၊ဒါမှမဟုတ် ငါတို့ပြောသမျှ အမှန် ပဲ လို့ ငါ တကော ကော
ဘက် လိုက်တတ်တာဟာ သမာဓိဂုဏ် မရှိကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှား ပြလိုက်တာပါပဲ။
မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း မရှိဘူးတဲ့။ လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ သတင်းထောက်
တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ် interview လုပ်တဲ့ အခါမှာ မိဘမဲ့ကလေး၊ ချစ်သောသူ
တစ်စုံ တစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူ စတဲ့ သူတွေကို မစာနာတဲ့ မေးခွန်းတွေ
အရင်က ရည်းစား ဘယ်နစ်ယောက် ရှိခဲ့ဘူးလဲ?
ရည်းစားဦးနဲ. ဘယ်မှာတွေ.ပြီး ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ.ကြသေးလဲ?
အိမ်ထောင်ပြုပြီး အိမ်ထောင် ပျက်သွားရင် နောက်ထပ် ထူထောင်ဦးမှာလား?
တစ်ပင်ပျက်မူ တစ်ပင်ထူ၊ ဘယ်နှစ်ပင်အထိ အစီအစဉ် ရှိပါသလဲ?
ဆံပင်ဆွဲ ပါးရိုက်ခံရပြီး ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးလို. ကြားရတယ်?
ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ ကြားက ကလေးယူဖို. အစီအစဉ် ရှိပါသလား?
ရလာတဲ့ ကလေး သေသွားရင်ရော နောက်ထပ် ယူမှာဘဲလား?
အဲဒါဘယ်တော့လဲ … ဟင်?
ဘယ်သူနဲ.လဲ ဆိုတာလေးပါ .. သိပါရစေ !
မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း မရှိဘူး လို့စာနယ်ဇင်း ဂုရုကြီး လူထုစိန်ဝင်း တို့
မောင်ဝံသ တို့ကပြောလို့ ကျွန်တော်တို့ကလဲ ဝင်ပြီးမေးကြည့်တာပါ။
သတင်းသမားကကော အပျိုစစ်ရဲ့လားလို့မေးရင် ဘယ်လိုဖြေမလဲ…. သတင်းသမားကို
အားပေးတဲ့သူ ကိုယ့်နှမကို အဲ့ဒီလိုပြန်မေးကြည့်ပါလား …
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို အလေးပေး လေးစားဦးမှပေါ့…..
ဇာနယ်ဇင်းနဲ့သတင်းသမားများ ဟာ အနုပညာသမားများနဲ့ မကင်းတာကို
လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စည်းကို စောင့်ကြစေချင်တယ်… ထက်ထက်ရဲ့
မကျန်းမာလို့ သေဆုံးသွားတဲ့ ကလေးအကြောင်းကို မညှာတာ မစာနာ ဘဲ
မေးခွန်းထုတ်တာတော့ ပါးရိုက်တာတောင် နဲသေးတယ်။မေးတဲ့အချိန်မှာလ ည်း
ဘယ်လိုမျက်နှာထားနဲမေးလဲမှ မသိတာ..လူတွေက ကိုယ် မဖြစ်သေးတော့ သူများကို
ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့.. မင်းသမီးလည်း လူဘဲ. .စော်ကားတာ ခံရပေါင်း
များလာတော့ ဘယ်သူမှ သည်းမခံနိုင်ဘူး.. ဘုရားရဟန္တာမှ မဟုတ်သေးတာ..
မစော်ကားရဲတဲ့ မင်းသမီးတွေ ကျတော့ ဘာလို့ မပြောရဲ မမေးရဲကြ
တာလည်း..သူများကို ချောင်ပိတ် မေးထားတဲ့ မေးခွန်းဘဲ.. ဖားအော်တာဘဲ
လူသိတယ်..မြွေ ကိုက်တာတော့ မသိဘူး ဆိုတာလိုပေါ့…
တေဇ မိန်းမနဲ့ ကိုင်ဇာနဲ့ ဖြစ်နေတာတွေ ရေပြသနာတွေ ကျတော့
လူထုသိသင့်တာကို အသိပေးရမယ်ဆိုတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတို့ မင်္ဂလာဈေး
မီးလောင်တာ ဝိုင်ယာရှော့ဖြစ်တာလို့ကြားတယ် အဲဒါကို သက်ဆိုင်ရာ
စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ် ဝန်ကြီးဌာန ကို သူတို့တာဝန်ပေါ့လျော့မှုအတွ က်
နစ်နာခဲ့ရသူတွေအပေါ် ဘယ်လို Responsibility ယူမလဲဆိုတဲ့
မေးခွန်းကိုမေးမလားဆိုတာမျိုးကိုစောင့်ကြည့်ရမယ် အဲဒီလိုကိစ္စတွေကရော
တိုင်းပြည်ရဲ့စတုတ္ထမန်ဒိုင်အတွက်အရေးမကြီးဘူးလား အဲဒါတွေကျတော့
လစ်လျူရှုနေကြတယ် မမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းကိုမေး လို့ ပြသနာဖြစ်တော့မှ
ထက်ထက်ကို နစ်နာအောင် အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ဝိုင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့
မြန်မာပြည် စာနယ်ဇင်းလောကကိုလည်း စိတ်ပျက်မိပါတယ်
စာနယ်ဇင်းက ဂျာနယ်လစ် အမျိုးသမီးမေးလိုက်တာကိုက UDHR (Universal
Declaration of Human Rights) လို့ခေါ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတန်း က အပိုဒ် ၁၂ ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်ခွင့် ကို
ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်လိုက်တာပဲ လူထုကို အသိပညာပေးနေတဲ့
စာနယ်ဇင်းတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ သူ့အခွင့်အရေးကို
နားလည်သဘောပေါက်မှုမရှိတာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက်စိတ်မကောင်းစရာပါ
June 23, 2010 at 2:49 am Reply
June 24, 2010 at 6:30 pm Reply
yes kyaw and htet htet moe oo is married .